VaKazembe naVaMatanga Voendeswa kuMatare neKusungwa Kwevasiri Kukwira Mabhazi eZUPCO
Gurukota rinoona nezvemukati menyika VaKazembe Kazembe, mukuru wemapurisa VaGodwin Matanga nemukuru wemapurisa muHarare vaendeswa kumatare nevesangano rinorwira kodzero dzevanotakurwa nemabhazi nemimwe michovha rePassengers Association of Zimbabwe, murwi wekodzero dzevanhu VaCharles Nyoni nemumwe mugari wemuHarare vaGeorge Tsaurayi vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo nekusunga vanhu vari kukwira mimwe michovha isiri mabhazi eZUPCO.
Rimwe gweta riri kumiririra Passengers Association nevamwe vaviri VaWilbert Mandinde veZimbabwe Human Rights NGO Forum vanoti vari kuda kuti mapurisa ambomira kusunga vari kukwira mishikashika sezvo mapurisa ari kutyora mutemo weRoad Traffic Act.
VaMandinde vatiwo vaenda kumatare nekuda kwekuti kambani yeZupco irikutenderwa kutakura vanhu pasi pemitemo inechekuita nekudzivirirwa kweCovid-19 haina mabhazi akakwana ekutakura veruzhinji.
Vanokokera mabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe VaTafadzwa Goliati vatiwo dambudziko rezvekufambiswa rinogadziriswa kana mamwe makambani akabvumidzwa kukwikwidzanawo neZUPCO.
VaCharles Nyoni avo vanove mumwe wevakasungwa svondo rapera mushure mekunge varohwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekukwira motokari isiri pasi peZupco vatiwo kambani yeZUPCO yaremerwa nemutoro.
Mumwe mufambi VaJeff Chaitezvi vatsinhirawo kuti mabhazi eZupco mashoma izvo zvirikusiya vafambi vachimira kwenguva yakareba uyewo vachikwirawo mabhazi akazarisa zvinovaisa panjodzi yechirwere cheCovid-19.
VaGoliati vatiwo mumabhazi eZupco aya vanhu varikuzarisa mushure mekunge vamirawo nguva ndefu vamwe vabvisa mamasiki izvo zvirikuisa veruzhinji panjodzi yechirwere cheCovid -19.
Munguva shoma yapfuura, vaimbova gurukota rezvehutano vari nhengo yeMDC Alliance Dr Henry Madzorera vakaudzawo Studio 7 kuti kushomeka kwemabhazi eZupco kurikukonzera kuungana kwevanhu zvakanyanya vakayambira kuti zvinogona kukonzera kupararira zvakanyanya kwechirwere cheCovid-19.
Gurukota rezvematunhu VaJuly Moyo vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti hurumende iri kutarisira mabhazi makumi mashanu matsva svondo rinouya.
Asi aka hakasi kekutanga hurumende ichivimbisa kuti mabhazi ari kuuya pasina chinobuda.
Kambani yeZupco inoti inoda mabhazi zviuru zviviri kuti munyika muve nezvekufambisa zvakakwana asi parizvino ine mabhazi mazana maviri nemakumi matanhatu nemaviri chete uye mamwe ese mabhazi ariko ndeemakambani akaenda pasi pechirongwa cheZupco.
Nyaya yekutengwawo kwemabhazi eZUPCO aya nekambani yeLindela yechipangamazano chemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa, VaKudakwashe Tagwirei haina kunyatsojeka.
Izvi zvakapa kuti vebepanhau reZimbabwe Independent riendese hurumende kumatare kuti iburitse magwaro ekuti sei kambani iyi iri kutenga bhazi rimwe chete kuChina nemadhora zviuru makumi mashanu nemasere zvine mazana mapfumbamwe kana kuti US$58, 900 asi yoritengesera ZUPCO nezviuru mazana maviri negumi nemaviri zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemaviri kana kuti US$212, 962.